Xisbi doonaya qiimadhismo tigidho - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maxado tareenada laga raaco sawir: Fredrik Sandberg/TT
Xisbi doonaya qiimadhismo tigidho
Sjöstedt: dadka waxay doorbidayaan tareenada
La daabacay måndag 12 december 2016 kl 14.01
Jonas Sjöstedt oo ku taliyey in la maalgeliyo tareenada.
Gudoomihaya xisbiga bidixda, Jonas Sjöstedt, ayaa soo jeediyey in dhamaan lacagta cashuurta ah ee ay dawladu qorshaynayso ina ay ku kordhiso tigidhada diyaaradaha loo isticmaalo qiimo dhimista tigidhada tareenada iyo hagaajinta wadooyinka tareenada.
- Waxan aragnaa in baahi weeyni ka jirto wadooyinka tareenada. Waxanan aaminsan nahay in hadii tareenadu yihiin casri dhakhso badan oo xiligii logu talagalay imanaya ay dadku doorbidayaan tareenka, ayuu yidhi Jonas sjöstedt.
Dhamaadkii nofeembar ayey ahayd markii ay dowladu ku talisey in 2018 la hirgeliyo cashuurta duulista. Laakiin xisbiyada laysku yidhaahdo Alliansen iyo xisbiga SD ayaa ka soo horjeeda cashuurtan oo ay aaminsan yihiin in shaqooyin badan lagu waayi doono.